दोस्रो भूउपग्रह प्रक्षेपणको तयारी नेपाल, ‘नेपाली स्याट-२ पदयात्री’ नाम रहने | raynewsdaily.com
दोस्रो भूउपग्रह प्रक्षेपणको तयारी नेपाल, ‘नेपाली स्याट-२ पदयात्री’ नाम रहने
Friday, November 19th, 2021, 2:52 pm
काठमाडौं  । अपरेटिङ सिस्टम (सञ्चालन प्रणाली) नेपालमै बनाउने योजनासहित भूउपग्रह प्रक्षेपणको प्राविधिक तयारीमा नेपाली वैज्ञानिक जुटेका छन् । ‘नेपाली स्याट-२ पदयात्री’ नाम रहने यो भूउपग्रह अघिल्लो भूउपग्रह ‘नेपाली स्याट-१’ भन्दा तीन गुणा ठूलो हुनेछ ।
सबै काम निर्धारित समयमा भ्याइए सन् २०२२ सम्ममा स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने तयारी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)को छ । नास्टको सहयोगमा डा. आभास मास्केसहित १० जना नेपाली युवा वैज्ञानिक भूउपग्रह निर्माणमा तल्लीन छन् ।
जापानको क्युटेक विश्वविद्यालयसँग मिलेर ‘नेपाली स्याट-१’ निर्माण गरी अमेरिकाबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो । यसपटक नेपाली इन्जिनियरले नेपालमा भूउपग्रहको प्रारूप बनाइसकेका छन् । यसलाई भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था (इस्रो)मा लगेर भूउपग्रह निर्माणसम्बन्धी विभिन्न परीक्षण गरिएको छ ।
डा. मास्केका अनुसार यस मिसनअन्तर्गतको स्याटेलाइटको प्लेलोड बोर्ड (पीसीबी) नेपालमै निर्माण गरिने छ । यस पीसीबीमा पीएक्स-४ अपरेटिङ सिस्टम मिसन, स्याटेलाइट सिस्टम अन चिप मिसन र ग्राउन्ड सेन्सर टर्मिनल मिसन फर ग्ल्यासिर लेक आउटब्रस्ट फ्लड (जीएलओएफ) मोनिटरिङ रहने छन् ।
यो व्यावसायिक स्याटेलाइटभन्दा अनुसन्धानात्मक क्षेत्रमा उपयोग हुने खालको स्याटेलाइट भएको डा. मास्केले बताउनुभयो । यस्ता परियोजनाले अन्तरिक्ष प्रविधिमा नेपाली युवालाई आकर्षित गर्ने उहाँको तर्क छ । प्रवक्ता ढुङ्गेलका अनुसार यो स्याटेलाइटले आगलागी, डढेलो र बाढीपहिरोलगायतका मौसमसम्बन्धी जानकारी तस्बिरबाट दिने छ । जसबाट मौसमसम्बन्धी पूर्वजानकारी सजिलै लिन सक्छौँ ।
‘नेपाली स्याट-१’ भूउपग्रह अन्तरिक्षमा ८ सय ४१ दिन रहेर खस्यो । नास्टका अनुसार अन्तरिक्षमा रहँदा यस भूउपग्रहले पृथ्वीलाई १३ हजार ४ सय ५६ फन्को लगाएको थियो । यो भूउपग्रह नयाँ वर्षको अवसर पारेर २०७६ वैशाख ५ गते बिहीबार २ बजेर ३१ मिनेटमा अमेरिकाको भर्जिनियास्थित वल्लोप्स द्वीपस्थित प्रक्षेपण केन्द्रबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो । ‘नेपाली स्याट-१’ भूउपग्रह स्पेस टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गरिरहेका नेपाली वैज्ञानिक आभास मास्के र नेपालबाट इलेक्ट्रिकल र कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरिरहेका नास्टका प्राविधिक अधिकृत हरिराम श्रेष्ठले बनाउनुभएको थियो ।